Qinqaaniin WannaCry jedhamu addunyaa guutuu irraa koompitaroota heddu Qadaaduun himame | oroict.com Solutions
Qinqaaniin WannaCry jedhamu addunyaa guutuu irraa koompitaroota heddu Qadaaduun himame | oroict.com Solutions oroict.com Solutions
Post in Hanna Koompitaraa, Marsaalee Ammee, Rakkoolee Qinqaanii
Qinqaaniin WannaCry jedhamu addunyaa guutuu irraa koompitaroota heddu Qadaaduun himame
Qinqaanii(Virus) Addunyaaf yaaddassaa ta’e Oomishaalee ‘Microsoft’ duraanii akka haarofmu dirqaa jira. Qinqaaniin WannaCry jedhamu addunyaa guutuu irraa koompitaroota heddu Qadaaduun himame
Dhaabbatni ‘Microsoft’ Sodaa guddoo koompitarootni Fayyadamtoota Idil-Addunyaa Qinqaanii(Virus) dhaan faalamuu danda’a jedhu keessa galee jira. Kunis haaromsa nageenya Oomishaalee ‘Microsoft’ duraanii irratti akka ta’etu himame. Isaan keessaa ‘Windiw XP kan 2001 irra deebiin gailakkifameefi kan dhaabbatichi bara 2014 irraa eegalee deeggarsa gochuu dhaabe. Dhaabbatichi akka jedhutti qaawwi qinqaanii tamsaasa jedhamee sodaatamaa ture cufamuu ibse.
Aggaamtotni Qinqaanii tamsaatii(Malicious virus hackers) isatti dhimma bahuun bara 2017 Raammoo Facaatuu ‘Wannacry'(Wannacry worm) hojjatanii facaasuun koompitaroota kumootaan lakkaayawaman irratti miidhaa geessisuun ni yaadatama.
Fayyadamtootni rakkoof qinqaanii tamsaatuu sanaaf caalmatti saaxilamuu kan danda’an yoo qabduun qinqaanitti hiikamte(Unpatched) dha jedhee kan barreesse Daarektara kutaa eegumsa balaa dhaabbata ‘Microsoft’ Simon pope dha.
Akka inni jedhutti, dawaan qinqaanii kanaa salphatti tamsa’uu kan dhoorgu ta’us Qinqaaniin facaatuun kun Koompitara Qinqaanichaan saaxilame irraa qunnamtii Interneetaatiin kan tamsaatu waan taateef salphatti babalchuu dandeessi jedha. Qinqaanotni facaatuun kana boodaa tooftaalee walfakkaatu akka ‘WannaCry’ bara 2017 kan dhimma itti bahaniidha jedheera.
Aggaammiin badaan kun faca’iinsa qinqaanii hin hiikamnee kan qaawwa tamsainnaa cufu, Oomishaalee ‘Microsoft’ akka:
Akka ragaalee deetaa Industirii agarsiisutti koompitarootni minjaalawoon addunyaa kanaa dhibbeentaa 3.75(3.75%) ta’antu XP fayyadama.
Marsariitiin gabaasa Tekinoolojii ‘Wired’ akka himetti aggaammii Qinqaanii kanaatiin koompitarootni miliyoonotaan lakkaawamu rakkoof saaxilamuu ibseera.
Daarektarri kutaa eegumsa balaa dhaabbata ‘Microsoft’ Simon Pope akka jedhutti ‘Fayyadamottni balaa kanaaf saaxilaman hatattamatti Oomisha Microsoft akka foooyyeffatan dhaame.
Dhaabbatichi akka jedhutti hanga ammaatti faca’iinsa qinqaanii mudate kanaan yakki saayibarii qaqqabe jedhu ragaan qabatamaa akka hin muldhatin himeera.
Dhaabbileefi Fayyadamtootni ‘Windows 8 fi 10’kan yeroo ammaa rakkoo uumame kanaaf hin saaxilamin fayyadamaa jiraachuu dhaabbatichi himeera.
Dubbisi | Read Marsaalee Hawaasummaa, Faayidaaleefi miidhaa isaanii: Kutaa 1ffaa
Ogeessi dhuunfaa nageenya koompitaraa ‘Graham Cluley’ akka jedhutti kalaqni hidhama XP irratti muldhate Raammoon sodaachisan kun yaaddessaa dha jedha.
Koompitarootni duriifi kanneen qinqaanii kanaan saaxilaman hanga ammaatti balaa jala kan jiraniifi kanas interneetatti hidhaanii kan jiranii dha jedhee ogeessichi, akkasumas Fayyadamtootni hatattamaan koompitara isaanii akka haaromsan akka dirqamaatti dhaameera.
Gabaasni kan BBCti kan Hiike O-Tech.
Oomishaalee Microsoft duraanii jijjiiramuu qabu jedhame